DHAGAYSO:Barnaamij Gaar ah oo ku Saabsan Geerida Naxdinta leh ee Maxamed Abshir Walde – Radio Daljir
DHAGAYSO:Barnaamij Gaar ah oo ku Saabsan Geerida Naxdinta leh ee Maxamed Abshir Walde
Maarso 6, 2016 8:50 b 0
Bacaadweyn, 06-March, 2016 -(Daljir)_Allaha u Naxariistee, Waxaa Magaalada Nairobi ee Xarunta dalka Kenya ku Geeriyooday Maxamed Abshir Yuusuf Walde oo horey u soo noqday Saxafi ,siyaasi iyo waliba Ganacsade caan ka ah gayiga Soomaaliyeed.
Sanadkii 1960-kii ayuu madax ka soo noqday warbaahintii dowladda ee xiligaa jirtay waxa kaloo uu horey ula soo shaqeeyay Idaacadda BBC-da.
Maxamed Abshir Walde ma uusan ahayn Ruug-caddaa Saxaafadeed oo qura, balse hawlo badan oo kale oo muhiim ah ayuu soo qabtay, maadaama uu ahaa Aqoon-yahan Mihnado badan bartay. Wuxuu wax kusoo bartay Jaamacadda Columbia University oo uu ka qaatay shahaadada MA.
Hadaba hoos ka dhagayso Barnaamij gaar ah oo ku saabsan geerida Marxuumka oo si weyn looga dareemay guud ahaa dalka Somaliya.
Kulan lagu soo Bandhigayay Guulaha Haweenka Puntland oo Garowe lagu Qabtay
DHAGAYSO: Geeridda Maxamed Abshir Waldo oo laga Dareemay Gudaha Dalka iyo Mas’uuliyiin Tacsi u Diray